Monday October 12, 2020 - 18:33:38 in Wararka by Mogadishu Times
Weeraryahanka reer France iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa muujiyay sida uu u jeclaa inuu wajaho kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé iyo Cristiano Ronaldo ayaa ka qeyb g
Weeraryahanka reer France iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa muujiyay sida uu u jeclaa inuu wajaho kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé iyo Cristiano Ronaldo ayaa ka qeyb galay kulankii xalay dhex maray xulalka Portugal iyo France ee ka tirsanaa tartanka xiisaha badan ee UEFA Nations League. Haddaba Kylian Mbappé ayaa ciyaarta kaddib ku daabacay boggiisa rasmiga ah ee "Twitter" labo sawir isaga ah oo uu ku wehliyo Cristiano Ronaldo, wuxuuna soo raaciyay qoraal ah: "Mid aan ku daydo". Weeraryahanka PSG ayaa sidoo kale ku muujiyay bartiisa "Twitterka" in Cristiano Ronaldo uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda.
Waxaa xusid mudan in dhowr wargeys oo Faransiis iyo Isbaanish ah iyo ilo wareedyo ku dhow kooxda Real Madrid ay soo jeediyeen in Kylian Mbappé uu u dhaqaaqi doono Los Blancos xagaaga soo aadan, haddii uusan cusbooneysiinin qandaraaskiisa Paris Saint-Germain